रोनाल्डो म्यान्चेस्टर सिटी जान सहमत भएकै हुन ? « रिपोर्टर्स नेपाल
रोनाल्डो म्यान्चेस्टर सिटी जान सहमत भएकै हुन ?
एजेन्सी, ११ भदौ । पछिल्लो समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो म्यान्चेष्टर सिटी जाने हल्ला चलाइएको छ । फरवार्ड रोनाल्डो प्रिमियर लिग क्लब सिटी जाने विषयमा व्यक्तिगत शर्तका विषयमा सहमत भएको पोर्चुगलको एक आउटलेटमा दाबी गरीएको छ ।
पोर्चुगलबाट सार्वजनीक खबर अनुसार रोनाल्डोले सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलासंग आफ्नो भविष्यलाई लिएर छलफल गरिसकेका छन् । सोही अनुसार सिरि ए क्लबले प्रिमियर लिगको च्याम्पियन क्लबसंग रोनाल्डोलाई छाड्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।
इटालीबाट यसै साता प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार सिटीले म्यान्चेस्टर युनाईटेडका पूर्व खेलाडीलाई दुई वर्षको प्रस्ताव गरेको छ । सातामा २ लाख ३० हजार पाउण्ड दिने गरि सिटीको दुई वर्षको प्रस्ताव छ । टोटेनहमका फरवार्ड ह्यारी केनलाई अनुबन्ध गर्न नसकेपछि सिटी नयाँ फरवार्डको खोजीमा रहेको छ ।-Photo: Agency